Muxuu Sadio Mané ka yiri codkii uu ka helay Lionel Messi abaal-marinta FIFA The Best 2019? – Gool FM
Muxuu Sadio Mané ka yiri codkii uu ka helay Lionel Messi abaal-marinta FIFA The Best 2019?
(Liverpool) 10 Okt 2019. Weeraryahanka reer Senegal iyo kooxda Liverpool ee Sadio Mané ayaa kasoo hor muuqday saxaafada wuxuuna kaga hadlay waxyaabo badan oo isaga ku saabsan iyo xirfadiisa ciyaareed ee Liverpool iyo Senegal.
Xulalka qaranka Senegal iyo Brazil ayaa kulan saaxiibtinimo ay maanta wada ciyaareen waxay ku kala baxeen barbro 1-1 ah, kulankan ayaana qeyb ka ah kulamada saaxiibtinimo caalamiga ah ee qorsheesnaa in la ciyaaro bishan Oktoobar.
Xiddiga reer Senegal ee Sadio Mané ayaa waxyaabihii uu kaga hadlay shirka jaraa’id uu maanta ka soo muuqday waxaa ka mid ahaa codeyntii abaal-marinta FIFA The Best ee dhawaan uu ku guuleystay Lionel Messi.
Mané ayaa markii ugu horeysay ka hadlay codkii uu ka helay kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi abaal-marinta FIFA The Best 2019.
Xiddiga kooxda Liverpool ee Sadio Mané oo arrintan ka hadlayay ayaa wuxuu yiri:
“Runtii waa wax aad u weyn, iyo amaan weyn oo igaaga timid Lionel Messi, runtii waan u mahadcelinayaa”
Si kastaba ha noqotee, Lionel Messi ayaa codeyntiisa waxa uu doorashada koowaad ka dhigay Sadio Mane, iyadoo doorashadiisa labaad uu ahaa Cristiano Ronaldo, halka doorashadiisa saddexaad uu ka dhigtay Frenkie de Jong.
RASMI: Xiriirka kubadda cagta FIFA oo go’aan ka soo saaray hadii uu Ansu Fati matali karo xulka qaranka Spain